Dhageeyso,,Maxbuus oo uu cafis u fidiyay Madaxweynaha farmaajo oo maanta lasii daayey. – Radio Baidoa
Dhageeyso,,Maxbuus oo uu cafis u fidiyay Madaxweynaha farmaajo oo maanta lasii daayey.
By Webmaster	 On Apr 5, 2020
Iyadoo oo la fulinayo amarkii Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee u cafiska ugu fidiyay 148 maxbuus ayaa Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka Saleebaan Maxamed Maxamuud waxa uu goob joog ka noqday maxabiis laga sii daynayo xabsiga dhexe ee Xamar.
Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa intii maxabiista la xaadirinayay ahaa goob joog isago oo qof kasta weydiinayay inta u xirnaa iyo inta sano ee lagu xukumay sido kalena waano iyo dardaarin siinayay in aanu mar kale gelin kiis u ku mutaysto xabsi kale.
Maxabiista nasiibka u yeeshay in lagu sii daayo cafiska u uu fidayay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa Warbaahinta u sheegay inay aad ugu faraxsanyihiin cafiska uu Madaxweynaha Dalka u fidiyay, ayna ka fogaan doonaan waxkasta oo ay ku muteysan karaan xabsi.
Gaashaanle Sare Cabdirashiid Cismaan Colow ayaa digniin iyo waano u jeediyay maxabiista maanta dib u helay xoriyaddooda, isago faray in ay ka fogaadan wax kasta oo u horseedi kara xarig kale.
Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka Saleebaan Maxamed Maxamuud ayaa tilmaamay in qof kasta oo ka faa’iidaystay cafiska Madaxweynaha uu wax ka bedelo noloshiisii hore, isagoo ku booriyay inay ka fogaadaan waxyaabaha ay mar kale ku mutaysan karaan xabsi.
Ugu dambeyntiina Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa 148 maxbuus ka soo gelbiyay xabsiga dhexe ee Xamar, iyagoo faraxsan dibna ula midoobi doona qoysaskooda oo aysan in muddo ah is arag.
Dhageeyso,,Baarlamanka Koonfur Galbeed oo maanta u fadhistey akhrinta 1aad ee miisaaniyad Sanadeeddka Dowlad Goboleedka KGS 2020-ka .
Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Hir-Shabeelle oo baaq u direy laamaha amniga Hir-Shabeelle.